ရှငျဘုရငျ'S SARCOIDOSIS မေးခွန်းလွှာ
အဆိုပါဘုရင့် Sarcoidosis မေးခွန်းလွှာ (KSQ) ဘုရငျရဲ့ College London မှအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့် SarcoidosisUK နေဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပြောင်းပြီးအွန်လိုင်းမှကျန်းမာရေးတိုင်းတာသည်။ အဆိုပါ KSQ လျင်မြန်စွာ sarcoidosis တစ်လူနာကျန်းမာရေးထိခိုက်သည်ကိုမည်ကဲ့သို့အကဲဖြတ်ထားပါသည်။ အဆိုပါ KSQ အကြောင်းပိုမိုဖတ်ရန်နှင့်အောက်ကမေးခွန်းလွှာယူပါ။
Sarcoidosis အထူးသဖြင့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောလူနာသက်ရောက်သည်။ အတိုင်ပင်ခံ sarcoidosis သူတို့ရဲ့ဘဝလူနာရဲ့ကျန်းမာရေးနှင့်အရည်အသွေးကိုထိခိုက်စေလျက်ရှိသည်ပုံကိုသိရန်အဘို့အထို့ကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံခက်ခဲသည်။ SarcoidosisUK အွန်လိုင်းသူတို့ရဲ့ KSQ ထားရန် Kings College မှာဆေးရုံနှင့်အတူပူးပေါင်းပါပွီ။ ဤသည်အထူးသ sarcoidosis လူနာတွေအတွက်ဒီဇိုင်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူ, ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကျန်းမာရေးမေးခွန်းလွှာဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကိုအတိုင်းအရှည်လူနာကျန်းမာရေးကိုခြေရာခံနှင့်ကုသမှုနှင့်စောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးအတိုင်ပင်ခံနှင့်အတူဆက်သွယ်ရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးပါမည်။ SarcoidosisUK တိုင်း sarcoidosis လူနာတစ်ဦးချင်းစီတိုင်ပင်ခြင်းမပြုမီ KSQ ပြီးဆုံးနှင့်၎င်းတို့၏အတိုင်ပင်ခံနှင့်အတူဆွေးနွေးရန်ရလဒ်ကြာအကြံပြုပါသည်။
အဆိုပါဘုရင့် Sarcoidosis မေးခွန်းလွှာ (KSQ) ယခုအွန်လိုင်းရရှိနိုင်ပါသည်။ THE KSQ ဖြည့်စွက်ရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ OR ရုပ်ပုံပေါ်ရှိ
သင်က KSQ အကြောင်းပိုမိုဖတျရှုနိုငျကအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတီထွင်ခဲ့ပုံ။
အဆိုပါ KSQ ကဘာလဲ?
အဆိုပါ KSQ sarcoidosis လူနာအားဖြင့်အထဲကပြည့်ဝဖို့အခမဲ့အွန်လိုင်းမေးခွန်းလွှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမေးခွန်းလွှာန်းကျင်ကို 10 မိနစ်ခန့်ကြာနှင့်5ကဏ္ဍများသို့ခွဲထွက်လျက်ရှိ၏ ယေဘုယျကျန်းမာရေးအခြေအနေ, အဆုတ်, ဆေးဝါး, အရေပြားနှင့်မျက်လုံးများ။ သို့သော်အချို့မေးခွန်းများကို (ထိခိုက် sarcoidosis အမျိုးအစားပေါ် မူတည်. ) ဖြေကြားမည်မဟုတ်ပါစုစုပေါင်း 29 မေးခွန်းများကိုရှိပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုမေးခွန်းတစ်ခုကိုသူတို့၌ရှိကြ၏မည်မျှနာကျင်မှုဒါမှမဟုတ်သူတို့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းများကိုရှာတွေ့မည်မျှခက်ခဲဥပမာ, သူတို့ဘဝများစွာကိုကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်နှင့် ပတ်သက်. ခံစားရပုံကိုအဆင့်သတ်မှတ်ရန်လူနာကမေးတယ်။ သတင်းအချက်အလက်ပေးလျှို့ဝှက်ဖြစ်ပါတယ်။ ရလဒ်များပိုမိုကောင်းမွန်ကျန်းမာရေးကိုညွှန်းမြင့်မားတဲ့ဂဏန်းနှင့်အတူ 1-100 ကြားရှိဂဏန်းတစ်လုံးအဖြစ်ပေးအပ်ထားတယ်။
အဘယ်ကြောင့် KSQ အသုံးဝင်သောပါသလဲ
အဆိုပါ KSQ လျင်မြန်စွာသက်ရောက်မှု sarcoidosis ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ဘဝအပေါ်ရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်အကဲဖြတ်ထားပါသည်။ ဤအချက်အလက်အသုံးဝင်သည်နည်းလမ်းတွေထဲကအတော်များများရှိပါတယ်:
အစီအစဉ်များကိုဂရုစိုက်: KSQ ရလဒ်များကိုသူတို့ရဲ့ sarcoidosis များအတွက်အကောင်းဆုံးစောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတိုင်ပင်ခံနှင့်လူနာကအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
တိုင်ပင်ဆွေးနွေး: အဆိုပါ KSQ တစ်ခုချင်းစီကိုတစ်ဦးချင်းစီမှအရေးပါဆုံးကနျြးမာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များသတ်မှတ်။ ရလဒ်ထို့ကြောင့်ညှိနှိုင်းများအတွက်အသုံးဝင်သောစမှတ်ပေး - ဆရာဝန်များလျင်မြန်စွာပြဿနာဒေသများဖော်ထုတ်ရန်နှင့်ဆွေးနွေးမှုများအာရုံစူးစိုက်နိုင်ပါတယ်။
ကုသမှု: အသစ်တစ်ခုကိုကုသမှုမပြုမီနှင့်နောက်ပိုင်းနှစ်ဦးစလုံးလူနာအားဖြင့်ယူလျှင်, KSQ ဒီကုသမှု၏အောင်မြင်မှု၏အခြေခံတိုင်းတာပေးနိုင်ပါသည်။
ဘယ်လိုလူနာ KSQ သုံးပါနှင့်ရလဒ်များကိုအနက်ကိုဘော်ပြသလဲ?
အဆိုပါ KSQ ဖြည့်စွက်ရန်လာသောအခါအတိုင်ပင်ခံလူနာအကြံပေးသင့်တယ် - ဒီပုံမှန်ဖြစ်ကောင်းစောင့်ဆိုင်းခန်းတွင်တစ်ဦးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမတက်ရောက်မီဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်လူနာသူတို့ကြိုက်နှစ်သက်အဖြစ်မည်သည့်အချိန်နှင့်အမျှအကြိမ်ပေါင်းများစွာမှာစစ်တမ်းဖြည့်စွက်ပေးနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်လူနာ sarcoidosis သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေလျက်ရှိသည်ကိုဘယ်လိုခြေရာခံဖို့တစ်ချိန်ကတစ်လလျှင်အဆိုပါ KSQ ယူပေလိမ့်မည်။
ရလဒ်များမေးခွန်းလွှာ၏အဆုံးမှာ screen ပေါ်မှာပြသနေကြပါတယ်။ အပြင်လူနာနှင့် / သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အကြံပေးဖို့မေးလ်ပို့ပေးခံရဖို့ကဤရလဒ်များအတွက်ရွေးစရာတခုရှိတယ်။ ရလဒ်များပိုမိုကောင်းမွန်ကျန်းမာရေးကိုညွှန်းမြင့်မားတဲ့ဂဏန်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအပိုင်း 1 နှင့် 100 အကြားတစ်ဦးအရေအတွက်ကိုပေးပါ။
ဘယ်လို KSQ တီထွင်ခဲ့သလဲ
အဆိုပါ KSQ ကဦးဆောင် King ရဲ့ကောလိပ်ဆေးရုံမှ, လန်ဒန်မှာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က 2012 ခုနှစ်တွင်တီထွင်ခဲ့သည် ပါမောက္ခ Surinder Birringဘုရင့်မှာအတိုင်ပင်ခံအသက်ရှုလမ်းကြောင်းသမားနှင့် Interstitial အဆုတ်ရောဂါခဲ။ သငျသညျအောကျဖျောပွဆေးဘက်ဆိုင်ရာဂျာနယ်ထဲမှာအတိုင်းအတာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် validation ကိုအကြောင်းပိုမိုဖတ်ရှုနိုင်သည်. SarcoidosisUK 2018 ခုနှစ်အွန်လိုင်း KSQ ပြောင်းရွှေ့ - ဤ digitalised ဗားရှင်းလူနာများနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်ပိုမိုအသုံးဝင်အောင်, ပိုပြီးအဆင်ပြေပြေနဲ့ကျယ်ပြန့်မရရှိနိုင်ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
Patel က, AS, Siegert, RJ, Creamer, ဃ, လာကင်, G. အ, Maher, TM, Renzoni, EA ၏ ... & Birring, အက်စ်အက်စ် (2012) ။ ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်း၏အကဲဖြတ်များအတွက် King ရဲ့ Sarcoidosis မေးခွန်းလွှာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် validation ကို။ thoraxjnl-2012 Thorax ။